Ngwa 5 gam akporo iji were igwefoto igwefoto gị dijitalụ (DSLR) | Gam akporosis
N'oge ihu igwe dị mma, ihe omume ntụrụndụ dị ka foto na-eme ka nghọta nwekwuo nghọta n'ihi na ndị ọrụ abụghị naanị ịnwekwu oge iji wepụta ihe okike ha ma weghara oge kachasị mma nke okike, ndụ ha, wdg, kamakwa, iji ihu igwe dị mma na ọkụ a, ị Achọrọ ịpụtakwu, nke ahụ na-abụkwa ihe mkpali maka ntụrụndụ a.
Imirikiti ndị na-eji foto akpọrọ ihe amachaghị, nke dị anya na ya, na igwefoto ekwentị, n'agbanyeghị agbanyeghị mma ha nwere ike ịdị na ndị ọrụ ndị ọzọ. Ya mere, ha nwere Igwefoto DSLR, makwaara dị ka DSLR, na nke na-esonyere anya dị iche iche, nchapụta, ebumnuche, tripods na ụdị ngwa niile. Ọ bụghị ihe ntụrụndụ dị ọnụ ala, mana nsonaazụ ya bara uru. Ọzọkwa, enwere ike ịmewanye ahụmịhe a site na iji ụfọdụ ngwa. Ndị a abụghị ezigbo ngwa nke ruru ọkwa sọftụwia desktọọpụ ọkachamara, agbanyeghị, ndị a bụ ụfọdụ ngwa gam akporo kacha mma iji rite uru na igwefoto DSLR gị ma kwalitekwu ihe okike gị.
1 Igwefoto Njikọ & Njikwa
2 Ngwa DSLR
4 Ngwa Hyperfocal Pro
5 Njikwa Ime Igwefoto (DSLR)
"Igwefoto Jikọọ na Njikwa" bụ otu n'ime ọtụtụ ngwa ga-enyere gị aka jikwaa igwefoto DSLR gị na ama gị. O dakọtara na igwefoto dị iche iche sitere na nnukwu ndị nrụpụta dịka Nikon, Canon, Sony na GoPro. Dabere na igwefoto gị, ị nwere ike jikọọ ya site na WiFi ma ọ bụ USB. Na mgbakwunye, ngwa ahụ na - enyekwa gị ohere bulite onyonyo ejiri igwefoto were na ekwentị gị.
Ọ bụ ngwa na - akwụghị ụgwọ, agbanyeghị na ọ nwere nhọrọ nhọrọ abụọ na - ewepụ mgbasa ozi ma nyekwa atụmatụ ndị ọzọ dịka ịnweta data EXIF.
"Ngwaọrụ DSLR" bụ ngwa maka ese foto SLR dijitalụ dị iche na nke gara aga kemgbe, dịka aha ya na-egosi, ọ mejupụtara setịpụrụ ngwaọrụ ndị ga-aba uru maka gị. Ekele diri Ngwa DSLR Nwere ike ịchekwa ntọala ị na-agbapụ, gbakọọ ebe dị anya nke hyperfocal ma ọ bụrụ na ịchọrọ omimi dị omimi karị, nweta mmetụta "zuru oke" na ọbụlagodi iji ekwentị gam akporo gị dị ka njikwa dị na igwefoto gị. Ma ọ bụrụ na ị ga-ese foto n'abalị ma ọ bụ n'ọnọdụ ọnọdụ dị ala, jiri "isiokwu gbara ọchịchịrị" ya.
Onye ọ bụla na-ese foto chọrọ ezigbo editọ foto nke iji melite ma zuo oke ọrụ ha yana, n'enweghị obi abụọ, Photoshop bụ nke zuru ezu, ewu ewu ma jiri nchịkọta akụkọ foto na ọkachamara foto mpaghara. Na nke a anyị na-ahụ "Adobe Photoshop Lightroom", ekwentị mkpanaaka nke Photoshop Ọ nwere ọtụtụ atụmatụ na ọrụ nke ụdị desktọọpụ ahụ nwere (kpachara anya, ọ bụghị zuru ezu). Ihe ndị dị na ya gụnyere nkwado maka foto RAW, ike ịlaghachi na nke mbụ ma ọ bụrụ na ị naghị enwe ntụsara na mgbanwe emere, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Imirikiti atụmatụ ndị a gụnyere bụ n'efu mana ịnwere ike ịnweta atụmatụ karịa ma ọ bụrụ na ịnweta ndenye aha Adobe Creative Cloud.
Ngwa Hyperfocal Pro
"HyperFocal Pro" bụ ezigbo ntụzi aka maka ndị na-ese foto na-egosi nchịkọta iji nweta ihe kacha mma. A) Ee, na-enye onye na-ese foto ezigbo ohere maka ilekwasị anya dabere na isiokwu, anya, igwefoto na iko. Ọ dakọtara na ọtụtụ igwefoto ma na-egosikwa ozi gbasara omimi nke ubi, nkuku echiche, na ndị ọzọ. Ọ bụ ngwa na - akwụghị ụgwọ, na - enweghị ịzụrụ ihe na enweghị mgbasa ozi ga - aba oke uru maka ndị mbido na ndị na - ese foto.
"Igwefoto Remote Control" bụ ngwa ọzọ nke ị nwere ike iji aka gị na-ejikwa igwefoto igwefoto gị dijitalụ, agbanyeghị, ọ na-arụ ọrụ naanị na igwefoto na ngwaọrụ nwere IR emitter / receiver. Ọ bụ ezigbo ngwa nke na-ejikọ oge nke na-enye ohere ịtọ ọtụtụ ngụkọta, bọtịnụ maka mkpuchi ... Ọ bụ n'efu.
You na-eji ụfọdụ ngwa ndị a ma ọ bụ ndị ọzọ yiri ya arụ ọrụ foto gị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » 5 ngwa gam akporo iji were igwefoto igwefoto gị dijitalụ (DSLR)
Asus weputara ZenFone 4 Max na igwefoto abuo na batrị 5.000 mAh na Russia